समस्याग्रस्त उद्धार विभाग खारेज हुने - Karobar National Economic Daily
समस्याग्रस्त उद्धार विभाग खारेज हुने
query_builderMay 5, 2017 8:04 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility695
काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त उद्धार विभाग खारेज गर्ने भएको छ । सबै समस्याग्रस्त संस्था बिक्री, पुनः सञ्चालन तथा खारेजी हुने क्रममा गएपछि केन्द्रीय बैंकले सो विभाग पनि खारेज गर्ने तयारी गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीवृद्धि ४ गुणासम्म गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्ति गरेर पुँजी बढाए भने केही कम्पनीले लगानीकर्ता मार्फत जुटाए ।
हाल अधिकांश वित्तीय संस्थाको पुँजी आधार बलियो भएको छ । वित्तीय संस्थाको पुँजी आधार बलियो भएकाले सानो तिनो झट्काले संस्था कमजोर हुने अवस्था नआउने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए ।
वित्तीय संस्था बलियो बनाउन पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको बताउँदै डा. नेपालले भने, “हिजो पुँजी आधार कमजोर हुँदा १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपरेको थियो, पुँजी वृद्धि योजनाले संस्थाहरू पनि घटेर ९ मा झरेका छन् ।”
केन्द्रीय बैंकले समस्याग्रस्त संस्थालाई हेर्न समस्याग्रस्त विभागनै खोलेको थियो । बाँकी रहेका संस्था पनि ३ देखि ६ महिनाभित्र सोही विभागको पहलमा टुंगो लाग्ने गभर्नर नेपालले बताए ।
पुराना समस्याग्रस्त संस्थाको टुंगो लाग्ने तथा नयाँ संस्थाको पुँजीगत आधार बलियो हुँदा समस्यामा नपर्ने बित्तिकै त्यो विभाग नै आवश्यक नभएको गभर्नर नेपालले बताए । “विभाग खारेज गर्ने योजनामा छौं,” उनले भने, “बाँकी संस्थालाई नेपाली तथा एनआरएनले लिने तयारी गरिरहेका छन् ।”
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाको पुँजीगत आधार कमजोर भएको भन्दै ०७४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले ५० करोड तथा राष्ट्रियस्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरूले ८० करोड एवं १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु-याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सोहीअनुसार बैंकहरूले पुँजी वृद्धि गर्ने अन्तिम तयारी पनि गरिरहेका छन् । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स, क्रिष्टल फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, बल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र ललितपुर फाइनान्स छन् ।
यी ९ संस्थाको ५ अर्ब ६७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बरावरको कर्जा छ । हालसम्ममा ती संस्थामा २ अर्ब ५० करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । समस्यामा परेका अधिकांश संस्थाको खराव कर्जा ९९ प्रतिशत छ । ती संस्थाको कुल चुक्ता पुँजी २ अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक उद्धार विभाग